မြန်မာ့ဆင်များအတွက် ရင်တွင်းစကား လှုပ်ရှားမှုတွင် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာ - Yangon Media Group
မြန်မာ့ဆင်များအတွက် ရင်တွင်းစကား လှုပ်ရှားမှုတွင် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာ
တောဆင်ရိုင်းများသတ်ဖြတ် အရေခွံ ခွာယူခံ နေရခြင်းကို တုံ့ပြန်ရန် Voices For MOMOs (မြန်မာ့ဆင်များအတွက် ရင်တွင်းစကား) လှုပ်ရှားမှုတွင် ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီများအုပ်စုနှင့် ရွှေတောင်လုပ်ငန်းစုတို့က ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြောင်း WWF-Myanmar ၏ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးအကြီးတန်းအရာရှိ ဦးရဲမင်းသွင်က ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကုမ္ပ ဏီအုပ်စုကြီးများဖြစ်သော ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီများအုပ်စုနှင့် ရွှေတောင်လုပ်ငန်းစုတို့မှ မိုမိုတို့အတွက်ရင် တွင်းစကားသံ (Voices For MO- MOs) နှင့် ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆင်များမှရရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် အခြားသောတရားမဝင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို ပပျောက်စေရန် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လှုပ်ရှားမှုကြီးကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း WWF-Myanmar က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ဦးရဲမင်းသွင်က”မြန်မာ့ဆင်များ အမဲလိုက်သတ်ဖြတ်ခံနေရသည့်ပြဿနာကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတရား မဝင်ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်နေသည့်ကိစ္စကို အဆုံးသတ်စေဖို့ဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းတွေချည်းပဲလည်း လုပ်လို့မရသလို၊ အစိုးရချည်းပဲလည်း လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Message တွေ ပြည်သူတွေဆီများများရောက်ဖို့က တတ်နိုင်သမျှအဖွဲ့အစည်းတွေ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ များများပါလေကောင်းလေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအဖွဲ့အစည်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ Voices For MOMOs အနေနဲ့ကတော့ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုပါတယ်“ဟု ပြောသည်။ ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီများအုပ်စုသည် မိုမိုတို့အတွက် ရင်တွင်းစကားသံ (Voices For MOMOs) ၏လူထုပညာပေးလှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုထိ ရောက်မှုရှိစေရန် ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ပြင်ပကြေညာချက်လှုပ် ရှားမှုတို့မှ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီး ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘုရားဖူးခရီးသည်များသွားလာမှု အများဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ် သော မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား၌ အသစ်စတင်ပြေးဆွဲမည့် ကေဘယ်ကားများတွင် လူထုအသိပညာပေးစာတိုများကပ်ကာ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုကို စတင်လုပ် ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီများအုပ်စုမှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါ်နန်းလိုင်ခမ်းက”ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်တွေချမှတ်တဲ့နေရာမှာ ကမ္ဘာ မြေကြီးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့အ ဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူ လက်တွဲပူး ပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကျိုး ကို အခြေခံတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေနဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသစ်တွေဟာ သဘာဝတရားနဲ့ သဟဇာတဖြစ် ပြီးသား စဉ်မြေးဆက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ စီးပွားရေးရပ်ဝန်းကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ ရွှေတောင်လုပ်ငန်းစုမှ အိမ်ခြံ မြေလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဒေါ်စန္ဒာထွန်းကလည်း “စဉ်ဆက်မပြတ် ရေရှည်တည်မြဲမှုရှိခြင်းက ရွှေတောင်ရဲ့အဓိကထား ဆောင်ရွက်တဲ့ နည်းဗျူဟာပါပဲ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုအချက်တွေအားလုံးရဲ့ အဓိကအချက်တစ်ခုက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ ဆင်ကြီးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါ။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ မိုမိုတို့အတွက်ရင်တွင်း စကားသံလှုပ်ရှားမှုကို ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ ဆက်လက်ပံ့ပိုး ကူညီပေးသွားမှာပါ”ဟုဆိုသည်။
Voices For MOMOs လုပ် ဆောင်မှုကြီးကို အများပြည်သူသတိပြုမှု မြင့်တက်လာစေရန်၊ တိုက်တွန်းအားပေးမှုများ ပိုမိုခိုင်မာလာ စေရန်နှင့် များစွာသော ထောက်ပံ့ကူညီမှုများဖြင့် ဆင်အပါအဝင်အ ခြားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် ယင်းတို့၏ ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရောင်း ဝယ်ဖောက်ကားမှုကို ရပ်တန့်ပစ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး နိုဝင်ဘာလမှ စတင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မွမ်ဘိုင်းမြို့မှ အချိုမုန့်ဆိုင် မီးလောင်ပြိုကျ၊ ၁၂ ဦးသေဆုံး
'ဘယ်လို အခက်အခဲ၊ ဘယ်လို စိန်ခေါ်မှုမျိုးကို မဆို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရာမှာ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေ??
မြဝတီမြို့ အမှတ်(၂) ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးနှင့် အာရှလမ်းမကြီး လမ်းဆုံ၌ လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးတွေ့ရှိ
‘ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာ ဟာသကား တစ်ကားပဲ လက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ကျန်တာ ဒရာမာဇာတ်တွေချည်းပဲ’ သရု
ခင်ဦးမြို့နယ် တရားသူကြီး အပါအဝင် သုံးဦးကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင??
AA အဖွဲ့ ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းမှု မရှိစေရေး ပိတ်ဆို့ ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်
မန္တလေးမြို့ အငှားအိမ်ရာ တိုက်ခန်းတွင် မူးယစ်သတင်းအရ ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးသော်လည်း အဓိက စေခိုင်?